ढिलो चाँडो नयाँ जनादेशबाट हामी सत्तामा जाने बाटो खोज्नुपर्छ : प्रकाशशरण महत - Sunaulo Nepal
ढिलो चाँडो नयाँ जनादेशबाट हामी सत्तामा...
फाल्गुण ९, २०७७ आइतवार १३:३१ बजे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति पनि ध्रुवीकृति भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई पार्टीले आधिकारिक रुपमा असंवैधानिक र वदनियतपूर्ण भनेपनि आन्दोलनमा जान भिन्न मत देखिएको छ । यसैबीच पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको आगामी महाधिवेसनको मिति तय गरेको छ । यसै सेरोफेरोमा न्यूज एजेन्सी नेपालले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग कुराकानी गरेको छ । कुराकानीमा सहमहामन्त्री महतले कांग्रेसले आन्तरिक राजनीति र संगठनको लागि महाधिवेसनमा केन्द्रीत हुने र प्रतिनिधि सभाको आवधिक निर्वाचनको लागि तयार हुनेगरी तयारी थाल्ने बताएका छन् ।
केही संकटमा गएको छैन । संविधानले नै दिएको व्यवस्था हो । त्यो व्यवस्थालाई हामीले सहज रुपमा उपयोग गर्न सक्छौं । हामीले के कुरा विर्सन हुन्न भने फागुन ७ गतेको कार्यतालिका थियो त्यो सम्पन्न गर्नको लागि देश एक वर्ष नै कोभिडमय रहयो । त्यसमा पनि करिब ५ महिना त लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्थाबाट देश गुज्रियो । लकडाउनको समयमा सम्पूर्ण जनता नै घरमा बन्दी भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको विभिन्न निकायहरु सक्रिय हुने अवस्था थिएन । त्यो समय हामीले गुमायौं । त्यसैले फागुन ७ गते महाधिवेसन सम्पन्न गर्नको लागि कठिनाई उत्पन्न भयो । त्यसैले हामीले थप ६ महिनामा अधिवेसन सम्पन्न गर्नको लागि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता प¥यो । त्यसमा पनि संसद विघटन पछि जुन हाम्रो विरोधको निरन्तर श्रृङ्खला पार्टीले सञ्चालन ग¥यो त्यो कारणले हामीले माघ भित्र सक्रिय सदस्यता पार्टीलाई बुझाउने समयावधि जुन जिल्लाहरुलाई दिएका थियौं आन्दोलनको कारणले पनि सबै जिल्लाबाट सक्रिय सदस्यता आइसकेन । त्यसकारणले पनि सक्रिय सदस्यता बुझ्ने थप समयको आवश्यकता प¥यो । त्यसपछि छानविनको प्रक्रिया आउँछ । छानविनको प्रक्रिया सम्पन्न भएर पार्टी सभापतिले हस्ताक्षर गरेर क्रियाशिल सदस्यता सार्वजनिक गरेपछि अधिवेसन अगाडि बढ्ने अवस्था भएको हुनाले आगामी भदौ ७ गते अधिवेसनको श्रृङ्खला शुरु हुन्छ । महाधिवेसनको समय भदौ ७ गतेलाई निर्धारित गरेका छौं ।
कोभिड लगत्तै प्रतिनिधि सभाको विघटनमा जानुपर्याे भन्नुभयो । तर कांग्रेस आन्दोलनमा हो की चुनाव प्रचारमा हो ?
नेपाली कांग्रेस जनतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो । जनताबाट अनुमोदित नभइकन सत्तामा जाने कुरालाई कहिलेपनि नेपाली कांग्रेसले स्वीकारेको छैन । त्यो हाम्रो सिद्धान्त, विचार हो । जबरजस्ती सत्तामा जाने कुरा अरु पार्टीहरुको लागि स्वभाविक हुनसक्छ तर नेपाली कांग्रेसको लागि स्वभाविक हुँदैन । त्यसो हुनाले जनतामा जाने, देशको बस्तुस्थितिको बारेमा जनतालाई सुशुचित गर्ने कुराहरु महत्वपूर्ण हुन । नेपाली कांग्रेसले यस अर्थमा विकेन्द्रीकृत आन्दोलन ग¥यो । हामीले जनतालाई खर्च गरेर काठमाडौंमा आउ भन्नुको सट्टा हामी जिल्ला जिल्लामा वडा वडामा आन्दोलन गर्दा अहिलेको समसामयिक राष्ट्रिय विषय, संसद विघटनको विषय, तीन वर्षको कुशासनको विषयलाई हामीले आम जनतामा पु¥याउन सफल भयौं । त्यसैले हामीले सञ्चालन गरेको विरोधको कार्यक्रम जनताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने तर खर्च गरेर ओहोरदोहोर गर्ने विकृति अरु दलले गरेको जस्तो खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीको दुवै घटकले समर्थन र विरोधमा गरेको देखियो त्यस अर्थमा हामी स्वस्फुर्त रुपमा विरोधका कार्यक्रमहरु ग¥यौं । यद्यपी यसमै हामी रोकिन्छौं भन्ने होइन । विरोधका ठूला कार्यक्रमहरु पनि हामी गर्न सक्छौं । त्यो गर्दा पनि जनताको स्वस्फूर्त सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्छौं ।
होइन अदालतले विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनमा जाउ भन्यो भने हामी तयारीबिनाको अवस्थामा रहने कुरा हुँदैन । जुनसुकै बाटो आदालतले निर्देश गर्छ त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ भन्नेपनि हामीलाई लागेको छ । यस अर्थमा पनि सभापतिले पुनस्थापना होस त्यसलाई पनि सहज रुपमा हामी स्वीकार गर्छौं र निर्वाचनमा जाने स्थिति आयो भने अदालतले त्यो किसिमको बाटो तय ग¥यो भने त्यो निर्णयलाई हामी अवेज्ञा गर्न सक्दैनौं । जनतामा गएर फेरी नयाँ जनादेश लिएर संसद स्थापना गर्ने कुरालाई हामीले अवमूल्यन गर्न सक्दैनौं भन्ने सभापतिको भनाई उपयुक्त नै हो ।